पोखरा विमानस्थलको ४७ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न
पोखरा, असोज ५–अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ट्रिय विमानस्थलको शनिबार अवलोकन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई गुणस्तरमा थप ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्धा्रित समयमा सक्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।
पोखरामा ठूला जहाजसमेत आउन सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्दै जिज्ञासा राखेका मन्त्री खतिवडालाई विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विनेस मुनाकर्मीले विमानस्थल निर्माणको प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । ३ हजार मिटर लामो रन वे बनाउँदा के हुन्छ ? भन्ने मन्त्री खतिवडाको प्रश्नमा प्रमुख मुनाकर्मीले पोखरामा ३ हजार मिटरको रन वे बनाउँदा पनि प्राविधिक हिसाबले ठूला बोइङ जहाज आउने सम्भावना कम भएको जानकारी दिए ।
प्रमुख मुनाकर्मीले पोखरामा बस्तीको बीचमा विमानस्थल भएको र पोखरा वरिपरि डाँडाहरु भएकाले ठूलाभन्दा मध्यम प्रकृतिका जहाज नै उपयुक्त हुने बताए । ‘२ हजार ५ सय मिटरको रन वे तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘थप रन वेभन्दा ह्यांगरलगायतका लागि थप १३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ परियोजनाको करिब ४७ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मुनाकर्मीले जानकारी दिए । हालसम्म ९५ प्रतिशत जग्गा मुआब्जाको विषयमा टुंगो लागेको र बाँकी ५ प्रतिशत विभिन्न कारणले गर्दा टुंगो नलागेको उनले बताए । चिनियाँ सिएएमसी कम्पनीले निर्धा्रित मिति सन् २०२१ जुलाइ १० भन्दा करिब ६ महिनाअघि काम सक्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको प्रमुख मुनाकर्मीको भनाइ छ ।
परियोजनामा हालसम्म करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको छ । पोखरा विमानस्थलको आसपासलमा सडक निर्माणसहितको भौतिक संरचनाको समेत काम हुँदै छ । ‘थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब ५१ करोड खर्च भएको र बाँकी केहीका लागि थप ६ करोड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीसामु प्रमुख मुनाकर्मीले त्यहाँको जमिन खन्दा कडा माटो देखापरेको, ढुंगा फोर्ने मेसिन प्रयोग गर्नुपरेको र केही सुकुम्बासी समस्या समेत रहेको जानकारी गराए । उक्त परियोजनामा १४ वटा विभिन्न भवन निर्माण हुने क्रममा हालसम्म अधिकांश भवन निर्माण भएको प्रमुख मुनाकर्मीले बताए ।
रन वे, ट्याक्सी वे, ह्यांगरसहितका केही संरचनाको हाल निर्माण कार्य सकिएको टर्मिनल भवन, टावरलगायतका भवनको फाउन्डेसनको काम सकिएसँगै अब स्टिल स्ट्रक्चरको काम सुरु भएको उनले जनाए । अहिले रिठ्ठेपानीको डाँडा कटान समेत सुरु भइसकेको छ । स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी २४ मिटर डाँडा कटान गरिनेछ । विमान उडानमा असर गर्ने भएकोले उक्त डाँडा कटान सुरु भएको हो । पोखरा विमानस्थलको रिङरोडका लागि १० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने प्रमुख मुनाकर्मीले बताए ।
पोखरा विमानस्थल करिब २२ अर्बको लगानीमा सन् २०२१ जुलाई १० भित्र सक्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले हाल निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सहायक ऋण सम्झौता भएपछि २०१७ जुलाई ११ (२०७४ असार २७ गते) बाट निर्माण सुरु भएको हो । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २० वर्षको अवधिमा २६ किस्ता तिर्ने गरी ऋण सम्झौता भएको छ । सुरुको ७ वर्ष भने (ग्रोस अवधी) कुनै किस्ता तिर्नु पर्दैन । त्यसपछि १३ वर्षसम्म ६÷६ महिनामा किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आज पहाडी भू–भागमा पानी पर्ने